उपाधिको होडमा ८ टोली, ब्राजिललाई रोक्ला त बेल्जियमले ? | Sagarmatha TVSagarmatha TV उपाधिको होडमा ८ टोली, ब्राजिललाई रोक्ला त बेल्जियमले ? | Sagarmatha TV
काठमाडौं । रूसमा जारी विश्वकप फुटबल अन्र्तगत सहभागी ३२ राष्ट्रमध्ये १६ हुँदै ८ टोलीको छनोट भएका छ । समूह चरणबाट १६ टोली बाहिरिए भने प्रिक्वार्टर फाइनलमा ८ टोली आ–आफ्नो खेलमा पराजय व्यहोर्दै घर फर्किए । जित हासिल गरका ८ टोलीको भिडन्त भने शुक्रबारबाट शुरु हुनेछ ।
मंगलबार राति भएको खेलमा स्वीडेन र इंग्ल्याण्डले आ–आफ्ना खेलमा जित हात पार्दै अघिल्ले चरणमा प्रवेश गरेसँगै क्वार्टरफाइनलमा पुग्ने ८ टोलीको टुंगो लागेको हो । यसअघि उरुग्वे, फ्रान्स, ब्राजिल, बेल्जियम, रसिया र क्रोएसियाले अन्तिम ८ को स्थान सुरक्षित गरिसकेका थिए ।
प्रि–क्वाटरफाइनलको अन्तिम खेलमा स्वीट्जरल्याण्डलाई हराउँदै स्वीडेनले अन्तिम ८ स्थान सुरक्षित गरेको हो । त्यस्तै, पेनाल्टी सुटआउटमा कोलम्बियालाई स्तब्ध पार्दे इंग्ल्यान्डले पनि आफ्नो आगामी यात्रालाई निरन्तरता दिएको हो । कोलम्बिया र ईङ्ल्याण्डको खेल निर्धारित समय बराबरीमा टुंगिएपछि अतिरिक्त समयमा प्रवेश गरेको थियो । जसमा पनि कुनै पक्षले पनि आफ्नो पक्षमा निर्णायक बनाउन नसकेपछि खेलको छिनोफानो पेनाल्टी सुटआउटबाट भएको हो ।
पेनाल्टी सुटआउटमा इंग्ल्यान्ड ४–३ ले विजयी भयो । खेलको ५७ औँ मिनेटमा इंग्ल्याण्डका कप्तान ह्यारी केनले पेनाल्टी मार्फत गोल गरेर खेलमा अग्रता लिएका थिए । जुन अग्रता निर्धारित समयसम्म नै रह्यो । तर थपिएको तेस्रो मिनेटमा कोलम्बियाका येरी मिनाले गोल गरेर र खेललाई बराबरीमा ल्याए । जसका कारण खेल थप ३० मिनेटको अतिरिक्त समय र पेनाल्टी सुटआउटसम्म पुग्यो ।
पेनाल्टी सुटआउटमा इंग्ल्याण्डका गोल किपर जोर्डन पिकफोर्डले कोलम्बियाका खेलाडी कार्लोस बाकाको पेनाल्टी रोकिदिएपखि खेल इंग्ल्याण्डको पक्षमा देखियो । इंग्ल्यान्डका कप्तान ह्यारी केन, मार्कस रसफोर्ड, केइरन ट्रिपियर र एरिक डायरले गोल गरे । कोलम्बियाका एक खेलाडीको पेनाल्टी खम्बामा लागेर बाहिरिएको थियो । कोलम्बियाका तर्फबाट जुआन कुवादराद्रो र लुइस मुरिएलले मात्रै पेनाल्टीमार्फत गोल गर्न सफल भएका थिए ।
बेल्जियम र ब्राजिलको स्थिति
त्यस्तै शुक्रबार नै हुने अर्को खेलमा बेल्जियमले ब्राजिलको सामना गर्नेछ । ब्राजिल पाँच पटकको विश्व विजेता टोली भए पनि अबको यात्रामा ब्राजिलका लागि बेल्जियम प्रमुख चुनौतका रुपमा देखिन्छ ।
समूह चरणको खेलमा समूह ‘इ’बाट विजेताका रुपमा प्रिक्वार्टर फाइनलमा पुगेको ब्राजिलले मेक्सिकोलाई पन्छाउँदै आगामी यात्रा तय गरेको हो । ब्राजिलले जारी विश्वकपमा समूह चरणको पहिलो खेलमा स्वीटजरल्याण्डसँग बराबरी, दोस्रो खेलमा कोष्टारिकासँग २–० को जित र तेस्रो खेलमा सर्वियासँग २–० को जित हात पार्दै समूह ‘इ’को विजेताको रुपमा प्रि क्वार्टर फाइनलको यात्रा तय गरेको थियो ।
ब्राजिल दक्षिण अमेरिकाबाट रुस विश्व कपका लागि शीर्ष स्थान हात पार्दै छानिएको पहिलो देश हो । छनोटमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको ब्राजिल लगातार २१ पटक विश्व कप खेल्ने एक मात्र भाग्यमानी राष्ट्र पनि हो । सन् १९३० देखि ब्राजिलले लगातार विश्व कप खेल्दै आएको छ । विश्वकपको सबैभन्दा सफल टिम मानिने ब्राजिलले पाँच पटक उपाधि जितिसकेको छ भने छैटौं पटक तारा थप्ने दाउमा दरिएको छ ।
जारी विश्वकपमा बेल्जियम पनि निकै नै लयमा देखिएको छ । युरोप छनोटको समूह ‘एच’को विजेता बनेर १३ औं पटक विश्व कपमा सहभागी बेल्जियम यसपालिको विश्व कपमा युरोपबाट छनोट भएको पहिलो देश हो । बेल्जियम सन् १९३० मा भएको विश्व कपको पहिलो संस्करणमा समेत सहभागि थियो । यसपछि बेल्जियमले ११ संस्करणमा सहभागीता जनाई सकेको छ ।
तर पनि विश्व कप यात्राको १२ औं संस्करणसम्म बेल्जियमले १९८६ मा चौथो हुने बाहेकको उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । यसपटक निकै शसक्त देखिएको बेल्जियम उपाधि जित्ने दाउमा देखिएको छ ।
आगामी शनिबार हुने दोस्रो क्वार्टरफाइनलको पहिलो खेलमा इंग्ल्याण्ड र स्वीडेन भिड्नेछन् । प्रि क्वार्टरफाइनलमा कोलम्बियालाई हराउँदै इग्ल्याण्डले अन्तिम ८ को स्थान बनाएको हो भने स्वीडेनले स्वीट्जरल्याण्डलाई हराउँदै क्वार्टरफाइनलमा प्रवेश गरेको हो ।
शनिबार नै हुने दोस्रो खेलमा आयोजक रसिया र क्रोएसिया आमने सामने हुनेछन् । यो विश्वकपमा आयोजक रसियाले शुरुवाती खेलदेखि नै शानदार प्रदर्शन गर्दै आएका कारण उपाधिको दाबेदारका रुपमा देखिएको छ । उसले प्रिक्वार्टरफाइनलमा बलियो तथा उपाधिको दाबेदारका रुपमा हेरिएको स्पेनलाई हराउँदै अन्तिम ८ को स्थान बनाएको हो । यता क्रोएसियाले भने डेनमार्कलाई हराउँदै आगामी यात्रालाई निरन्तरता दिएको छ ।